Imininingwane Yokuyeka Ugwayi Yabahlinzeki beVermont - 802Quits
Izinhlelo Zokumiswa KweVermont
Yeka Ulwazi Lomuthi
Intsha Nabantu Abadala
Ukufaka amakhodi nokubhila
Akukaze kube nesikhathi esibaluleke kakhulu sokuba iziguli zakho ziyeke.
Isikhuthazo sakho, uzwela kanye nezeluleko zakho kubaluleke kakhulu kulo lonke uhambo lokuyeka kwesiguli. Singakusiza ngalezo zingxoxo.
Buza kukho konke ukuvakasha. Uma isiguli sakho singaveli “silungile,” noma uma bezame kaningi, ungabakhuthaza ukuthi bacabange ukuyeka ngokucela nje. Sebenzisa lezi Amaphuzu Okukhuluma (PDF) ithuthukiswe abahlinzeki beVermont.
Bheka ama-802Quits. Izinhlelo ezihlukile zokuyekiswa kwabantu abadala nentsha zaseVermont zivumela iziguli zakho ukuthi zithole okubasebenzelayo. Izinsizakusebenza zimahhala futhi zibanzi futhi ziyatholakala ku-inthanethi, mathupha, ngocingo, ngombhalo nangokufinyelela kwi-nicotine replacement therapy (i-NRT), kufaka phakathi amabala amahhala, inhlaka kanye ne-lozenges. I-NRT iyatholakala kubantu abadala abaneminyaka engu-18 + futhi inconyelwa ukuthi ingekho ilebula enencwadi kadokotela yentsha engaphansi kweminyaka eyi-18 ubudala abayimilutha ngokulinganisela noma kanzima kwi-nicotine futhi abakhuthazwa ukuyeka.
Izinsiza ezenziwe ngezifiso nemivuzo iyatholakala kubantu abakhethekile abanjengo Amalungu eMedicaid (uvuza kufika ku- $ 150), I-LGBTQ, AmaNdiya aseMelika futhi amaVermonters akhulelwe (uvuza kufika ku- $ 250). Labo abasebenzisa imikhiqizo kagwayi ye-menthol bangathola izikhuthazi ngohlelo ukubhalisa (uvuza kufika ku- $ 50).
I-Toolkit Yezinsizakusebenza Zokumiswa zabahlinzeki
Landa izinto zokwakha nezinsizakusebenza ezihlanganiswe kusuka kulo lonke leli sayithi, kufaka phakathi amaphuzu okukhuluma, izinsizakusebenza zeziguli, imihlahlandlela, izethulo kanye namafomu ahlobene nokubandakanya iziguli ukuthola ukwelulekwa ngogwayi, kubhekiswa kuma-802Quits, izinhlelo zeVermont Cessation, ukuyeka imishanguzo nokusha kwentsha.
Isiqondiso esisha somtholampilo saseNew American Thoracic Society sokwelashwa kokuncika kogwayi kubantu abadala.
Umhlahlandlela womkhuba womtholampilo ka-2020 uqukethe izincomo eziyisikhombisa ezintsha ezinezinguquko ezilula zomkhuba ezingakhuphula ukusebenza kwe-pharmacotherapy yokuthembela kugwayi. Izincomo ezimbili zifaka:
Kubantu abadala abathembele kugwayi abaqala ukwelashwa, sincoma i-varenicline ngaphezulu kwesiqephu se-nicotine.
Kubantu abadala abathembele kugwayi abangakulungele ukuyeka ukusebenzisa ugwayi, sincoma ukuthi odokotela baqale ukwelashwa nge-varenicline kunokulinda iziguli zikulungele ukuyeka ukusetshenziswa kukagwayi.
Funda umhlahlandlela omusha ngazo zonke izincomo eziyisikhombisa e-American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Bukela ividiyo yemizuzu emibili efingqa umhlahlandlela omusha.
Izinzuzo Zokuqeda Ugwayi
Kulula manje kunanini ngaphambili ukusiza iziguli zakho ziyeke. Futhi amaVermonters amaningi awazazi izinzuzo eziphelele ezitholakala ngeMedicaid kanye nezinhlelo ezingama-802Quits zokuyeka ugwayi, kufaka phakathi u- $ 150 wemivuzo.